Tababbarka jaranjarooyinka: Faa'iidooyinka, tilmaamaha iyo inbadan! | Ragga Stylish
Dad badan ayaa sheegaya in tababarka jaranjarada la fuulo ay tahay tababarka ugu dambeeya. Buun buunin ama maya, waxa aadan ku diidi karin waa taas waa jimicsi heer sare ah oo waxtar badan leh.
Jaranjarooyinka jaranjarooyinka ayaa ah mid ka mid ah jimicsiyada lagu calaamadeeyay mid dhameystiran, maadaama ay isku dareyso wadnaha iyo tababarka xoogga. Maxaa intaa ka badan, waxaa lagu dhaqmi karaa habka tababarka caadiga ah iyo xaalado badan oo nolol maalmeedka ah. Tusaale ahaan, isticmaalka jaranjarooyinka goobta shaqada iyo xarumaha laga dukaameysto halkii laga isticmaali lahaa wiishka ama wiishka. Soo hel faa iidooyin dheeri ah iyo tilmaamaha ugu fiican ee aad ku dhaqmi karto:
1.2 Waxaa lagu sameyn karaa banaanka
1.3 Adkaynta iyo codadka lugaha
1.4 Wuxuu gubaa kalooriyo badan
1.5 Tababbarka ku meel gaarka ah
2 Tilmaamaha jimicsiga jaranjarada
2.2 Diirimaad oo fidso
2.3 Farsamadu waa muhiim
2.4 Orod oo hoos u soco
2.5 Jaranjarada ku habboon?
2.6 Joogso dhiirigelin
2.7 Shaqee muruqyo badan
3 Sida loo aado heerka ku xiga
Si ka duwan jimicsiyada kale, jaranjarooyinka loo fuulo uma baahna maalgelin lacag ah. Sababta ayaa ah in aan loo baahnayn qalab gaar ah (oo leh kabo isboorti oo caadi ah iyo dhar raaxo leh ayaa kugu filan) waxaadna si fiican ugu tababaran kartaa meelo badan oo dadweynaha ka mid ah magaaladaada.
Waxaa lagu sameyn karaa banaanka
Haddii aad ka mid tahay kuwa doorbidaya dibedda kor ku xusan afarta darbi ee jimicsiga, ama waxaad jeceshahay inaad labada meeloodba ku kala bedesho, tababarka adoo jaranjarada ku fuulaya ayaa ikhtiyaar ah inaad tixgeliso.
Adkaynta iyo codadka lugaha
Haddii aad jeclaan lahayd inaad xoojiso oo aad codkaaga lugaha u dhigto ku hagaaji sawirkaaga gaagaaban, tababarka adoo jaranjarada fuulaya waa shay aamin ah.
Wuxuu gubaa kalooriyo badan
Tababbarka noocan ahi waa jimicsi aan caadi ahayn oo wadnaha ah, taas oo kaa caawin karta inaad ka takhalusto kalooriyo badan.
Tababbarka ku meel gaarka ah
Tababbarka jaranjarooyinka waxaa laga helaa tababar bareeg ah. Si loo dhaqan geliyo Waa u fududahay sida socodka iyo kor socodka oo mar labaad ku celi, taas oo ku xidhan tirada ku celcelinta qaabka muuqaalka ah iyo dhererka jaranjarada la doortay. Waa in la ogaadaa in xilliyada kaladuwan ay caawiyaan gubidda dufanka badan iyo dhisidda xoog iyo adkeysi.
Tilmaamaha jimicsiga jaranjarada
Markaad bilaabeysid jimicsi cusub waxaad u baahan tahay inaad si tartiib tartiib ah u socoto. Si tartiib tartiib ah u kordhi kororka socodkaaga iyo muddada tababarka.
Diirimaad oo fidso
Diirinta iyo fidinta waxaa loo arkaa inay muhiim tahay si loo gaaro a tababaro wax ku ool ah oo yareeya khatarta dhaawaca. Tababbarka adoo jaranjarada ka fuulaya ayaan iyana ka reebanayn. Nasasho qaadasho marka loo baahdo iyo biyo-gelinta, gaar ahaan xilliga xagaaga, sidoo kale waa taxaddarro maskaxda lagu hayo.
Farsamadu waa muhiim
Iska ilaali inaad isticmaasho hal muruq. Hubso in muruqyada lugaha oo dhami ay shaqeynayaan, ma ahan kaliya weylaha. Isla mar ahaantaana, iskuday inaad yareyso culeyska jilbaha si aad xoogga ugu wareejiso muruqyada iyo murgacashada.
Orod oo hoos u soco
Waxaa jira sababo badan oo ka badan tababbarka bareegyada si aad hoos ugu dhaadhacdo adigoo lugeynaya halkii aad ordi lahayd. Dabcan, amniga ayaa ka mid ah. Ka ilaali jilbahaaga iyo anqawyadaada walaaca xad dhaafka ah waa mid kale. Haddii meeshu leedahay qaab kale (wiishka, jiirada…), tixgeli isticmaalkeeda.
Jaranjarada ku habboon?
Jaranjarooyinka ku habboon tababarka noocan ahi waa kuwo dhaadheer, toosan (jaranjarooyinka leexashada ama wareegga ah waxay noqon kartaa dhibaato) oo aan aad u cidhiidhi ahayn
Isku dayga inaad garaacdo calaamada had iyo jeer waxay abuureysaa dhiirigelin, wax door weyn ka ciyaara tababarka. Immisa jeer ayaad awood u leedahay inaad ku gaadho dusha sare wakhti go'an, tusaale ahaan 10 daqiiqo? Raadi ka dibna u shaqee sida ugu adag ee suurtogalka ah si aad u horumariso astaantaada.
Ma rabtaa inaad hagaajiso orodkaaga? Ulaabo sida ugu sareysa ee aad awoodid 30 ilbiriqsi oo dib ugu laabo bilowga. Ku celi oradka dhawr jeer oo dheeri ah iskuna dayaya inaad mar walba sare u kacdo.
Shaqee muruqyo badan
Beddel jihada jirkaaga markaad jaranjarada fuuleyso in laga shaqeeyo murqaha kale. Isku day inaad ka sameyso dhinaca ama xagga dambe, laakiin had iyo jeer ka dhig degganaanta xawaare ka horreeya si looga hortago shilalka.
Sida loo aado heerka ku xiga
Haddii dhowr jimicsi kadib, aad dareento in jaranjarooyinku aysan mar dambe u keenayn isla caqabada jidhkaaga, kordhi xoojinta adoo miisaanka ku daraya boorsada dhabarka ama si fudud isagoo gacanta ku haya dhaldhalaal intaad kor u kacayso. Haddii aad doorato ikhtiyaarka labaad, tixgeli inaad sameyso dhowr wiish oo dumbbell ah meel kasta oo soo degaysa ama markaad gaarto xagga sare, inaad sidoo kale ka shaqeyso xooggaaga gacanta, oo markaa ka dhig jimicsigaaga mid dhameystiran.
Laakiin waxaa jira ikhtiyaarro kale oo aan la xiriirin miisaanka dheeriga ah si aysan u joogsan oo u sii wadin hagaajinta qaabka jirka. Mid waa Samee noocyo riixitaano ah, fadhiisimo, ama ciriiryood oo ku yaal dhammaan soo-degitaanka jidka sare.
Ugu dambeyntii, tixgeli Jidka loo maro kor ka soo degista ilaa soo degitaanka. U kac jaranjarada koowaad oo hoos ugu dhaadhaca jaranjarada dusheeda. Ka dib, adigoon istaagin, u gudub tan labaad oo soo deg oo mar labaad hoos u deg. Markaa sidaas oo kale ku samee saddexaad, afaraad, iwm, illaa aad ka gaadho xagga sare. Markaa si dhakhso leh ayaad ugu socon kartaa heerka ugu hooseeya, hawo qaadataa, oo jimicsiga ku celin kartaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Faa'iidooyinka tababarka adoo fuulaya jaranjarooyinka